Taratasy avy Amin’ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah | Diary 2015
“Misaotra an’Andriamanitra mandrakariva izahay rehefa mahatsiaro anareo rehetra amim-bavaka. Tadidinay foana eo anatrehan’Andriamanitra Raintsika mantsy izay ataonareo noho ny finoanareo, sy ny asa mafy ataonareo amim-pitiavana, ary ny fiaretanareo vokatry ny fanantenanareo an’i Jesosy Kristy Tompontsika.” (1 Tes. 1:2, 3) Mahalaza tsara ny tianay holazaina momba anareo ireo teny ireo. Faly izahay manana anareo, ary misaotra an’i Jehovah noho ny asa tsara ataonareo.
Nazoto nandray anjara tamin’ny asan’ilay Fanjakana ianareo tamin’ny taon-dasa, noho ny finoana sy ny fitiavana anananareo. Maro taminareo no nitady fomba hanitarana ny fanompoana. Tao ireo nifindra tany amin’ny faritra nilana mpitory maro kokoa, ary nisy aza nankany an-tany hafa mihitsy. Ny hafa indray namelatra latabatra fampirantiana teny amin’ny toerana be olona. Maro no nanao mpisava lalana mpanampy nandritra ny vanim-potoan’ny Fahatsiarovana, na tamin’ny volana nitsidihan’ny mpiandraikitra ny faritra, na tamin’ilay ezaka manokana natao tamin’ny Aogositra 2014. Derainay ianareo satria nanompo an’i Jehovah tamin’ny fo manontolo, na dia tsy mitovy aza ny zavatra iainanareo. (Kol. 3:23, 24) Misaotra an’i Jehovah tokoa izahay amin’izay “ataonareo noho ny finoanareo.”
Tena ankasitrahanay koa ny ‘asa mafy nataonareo tamim-pitiavana.’ Trano maro isan-karazany mantsy no naorina eran-tany, mba hampiasaina hanompoana an’i Jehovah. Ilaina maika ireny trano ireny, satria mitombo foana ny vahoakany. (Isaia 60:22) Eritrereto ange e! Nahatratra 8 201 545 ny tampon’isan’ny mpitory tamin’ny taon-dasa, ary 9 499 933 ny salanisan’ny fampianarana Baiboly isam-bolana. Maro àry ny biraon’ny sampana nila nitarina na nohavaozina. Tsy izay ihany fa nila Efitrano Fanjakana maro kokoa isika. Nasiana biraon’ny fandikan-teny mitokana koa tany amin’ny faritra maro eran-tany. Amin’izay ny mpandika teny afaka mipetraka sy miasa any amin’ilay faritra ampiasana ny fiteniny.
Eritrereto àry hoe: ‘Inona no azoko atao mba hanohanana an’ireny tetikasa ireny?’ Afaka mandray anjara amin’ny fanorenana angamba ny sasany amintsika. Na mahay manao fanorenana anefa isika na tsia, dia samy afaka manome amin’ny zava-tsarobidy ananantsika. (Ohab. 3:9, 10) Izany no nitranga rehefa naorina ny tranolay masina. Tena nalala-tanana ny Israelita ka notohanam-potsiny ny fanomezana nataony. (Eks. 36:5-7) Azo antoka fa tena manohina ny fontsika ireny ohatra ao amin’ny Baiboly ireny, ka lasa te hanahaka azy ireny koa isika. Mbola misaotra an’i Jehovah ihany izahay noho ny “asa mafy ataonareo” amin’izany karazana fanompoana izany.
Faly koa isika mahalala hoe miaritra foana ny mpiray finoana amintsika, ka tsy mivadika mihitsy. Anisan’izany ireo rahalahintsika any Korea Atsimo. Efa tamin’ny 1950 no ho mankatỳ ny rahalahy tanora any no nogadraina, satria tsy mety manao miaramila. Tsy nitovy ny faharetan’ny sazin’izy ireo. Efa hatramin’ireo ray aman-dreny be taloha no niharan’izany, ary mbola iharany koa ny taranaka atỳ aoriana, nefa tsy milavo lefona mihitsy. Manatanjaka ny finoantsika izy ireo satria niaritra foana.
Efa 20 taona mahery izay ireo rahalahy telo any Érythrée no nigadra. Ny hafa nigadra latsak’izany, ary misy aza anabavy miaraka amin’ny zanany. Maro ny ezaka efa natao mba hanafahana azy ireo, nefa tsy nisy nahomby izany. Tsy mivadika mihitsy anefa ireo mpiray finoana amintsika ireo, na dia mafy aza ny mahazo azy. Tsy hadinontsika mihitsy ny mivavaka ho azy ireo.—Rom. 1:8, 9.
Tsy hoe gadraina noho ny finoanareo daholo akory ianareo. Maro aminareo anefa no miaritra satria efa mandroso taona, marary, enjehin’ny vady na havana tsy Vavolombelona, na miaritra zava-tsarotra hafa tsy fantatr’olon-kafa. Mendri-piderana ianareo, satria mbola manompo an’i Jehovah foana ary tsy mivadika aminy. (Jak. 1:12) Misaotra an’i Jehovah koa izahay noho izany.
Hoy ny Salamo 106:1: “Misaora an’i Jehovah fa tsara izy.” Misaotra an’i Jehovah tokoa izahay satria miasa mafy ianareo noho ianareo manam-pinoana sy be fitiavana, sady hita koa hoe miaritra. Tena tianay ianareo rehetra, ary mivavaka amin’i Jehovah izahay mba hanatanjaka sy hanohana anareo foana izy, ary hitahy anareo mba hahafahanareo hanompo azy mandrakizay.
Ny mpiara-manompo aminareo,